Sida Loogu Aqoonsado Macaamiishaada B2B ee leh Qalabka Mashiinka | Martech Zone
Talaado, Maarso 31, 2020 Talaado, Maarso 31, 2020 Emily Johnson
Shirkadaha B2C waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu horreeya ee dadaallada falanqaynta macaamiisha. Jaangooyooyin kala duwan sida ganacsiga elektarooniga ah, warbaahinta bulshada, iyo ganacsiga moobiilku waxay u saamaxeen ganacsiyada noocan oo kale ah inay xoqaan suuq-geynta oo ay bixiyaan adeegyo macaamiil oo aad u wanaagsan. Gaar ahaan, xog ballaaran iyo falanqeyn heer sare ah oo loo maro habraaca barashada mashiinka ayaa u suuragelisay istiraatiijiyadda B2C inay si wanaagsan u aqoonsadaan dhaqanka macaamiisha iyo howlahooda iyagoo adeegsanaya nidaamyada qadka.
Barashada mashiinka ayaa sidoo kale bixisa karti soo kordheysa si loo helo aragti ku saabsan macaamiisha ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, korsashada shirkadaha B2B wali ma aysan dhaqaaqin. In kasta oo caanku sii kordhayo barashada mashiinka, haddana weli waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan sida ay ugu habboon tahay fahamka hadda jira Adeegga macaamiisha B2B. Marka bal aan caddeynno taas maanta.
Barashada Mashiinka si loo fahmo Qaababka Falalka Macaamiisha
Waan ognahay in barashada mashiinku ay tahay fasal algorithms loogu talagalay in lagu daydo sirdoonkeena iyada oo aan la helin amarro cad. Iyo, qaabkani waa midka ugu dhow sida aan u aqoonsanno qaababka iyo isku xirnaanshaha nagu hareeraysan oo aan ugu nimid faham sare.
Hawlaha garashada dhaqameed ee B2B waxay kuxiranyihiin xog xaddidan sida cabirka shirkadda, dakhliga, xaraashka ama shaqaalaha, iyo nooca warshadaha oo lagu sifeeyay lambarrada SIC. Laakiin, qalab wax lagu barto mashiin si sax ah loo qorsheeyay ayaa kaa caawinaya inaad si caqli gal ah u kala soocdo macaamiisha iyadoo lagu saleynayo macluumaadka waqtiga dhabta ah.
Waxay tilmaamaysaa fikradaha ku habboon ee ku saabsan baahida macaamiisha, dabeecadaha, dookhyada, iyo dabeecadaha la xiriira badeecooyinkaaga ama adeegyadaada waxayna u adeegsataa aragtiyadan si ay ugu fiicnaato suuq-geynta iyo falalka iibka hadda jira.
Barashada Mashiinka Qeybta Macluumaadka Macaamiisha
Adiga oo ku dabaqaya barashada mashiinka dhammaan macluumaadka macaamiisha aan ku aruurinno ficilladooda websaydhadeena, suuqleydu si deg deg ah ayey u maamuli karaan una fahmi karaan meertada nolosha iibsadaha, suuqa waqtiga-dhabta ah, kobcinta barnaamijyada daacadnimada, sameysashada isgaarsiin shaqsiyeed iyo mid khuseeya, helitaanka macaamiil cusub iyo haysaa macaamiisha qiimaha leh muddo dheer.
Barashada mashiinka ayaa awood u siineysa qeybaha horumarsan ee muhiimka u ah shaqsiyeynta hal-hal Tusaale ahaan, haddii shirkaddaada B2B ay himilo leedahay turxaan bixinta khibrada macaamiisha iyo xoojinta ku xirnaanta xiriir kasta, kala-soocid sax ah oo xogta macaamiisha ah ayaa haysa furaha.
Si kastaba ha noqotee, tani si ay u dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad haysato hal keyd, xog nadiif ah oo barashada mashiinka ay ku shaqeyn karto iyada oo aan dhib lahayn. Marka, mar alla markii aad heysato rikoorro noocan oo kale ah, waxaad u adeegsan kartaa barashada mashiinka inaad ku kala soocdo macaamiisha iyadoo lagu saleynayo sifooyinka hoos ku xusan:
Baahiyaha / sifooyinka ku saleysan sheyga
In badan oo kale
Barashada Mashiinka si loogula taliyo Istaraatiijiyadaha ku saleysan Isbeddellada
Mar alla markii aad kala soocdo macluumaadka macmiilka, waa inaad awood u leedahay inaad go'aan ka gaarto waxa la sameynayo iyadoo lagu saleynayo xogtan. Waa tan tusaale:
Haddii millennials-ka Mareykanka ay booqdaan dukaanka raashinka ee internetka, rogrogo xirmada si aad u hubiso qadarka sonkorta ee calaamadda nafaqada, oo aad iska tagto adigoon wax iibsan, barashada mashiinku way aqoonsan kartaa isbeddelka noocan oo kale ah waxayna tilmaami kartaa dhammaan macaamiisha ficilladan sameeyay. Suuqyayaashu waxay wax ka baran karaan xogta dhabta ah ee noocan oo kale ah waxayna u dhaqmi karaan si waafaqsan.
Barashada Mashiinka si loogu Gudbiyo Nuxurka Saxda ah ee Macaamiisha
Horaantii, suuq-geynta macaamiisha B2B waxay ku lug lahaayeen soo saarista waxyaabo ka soo qaadaya macluumaadkooda waxqabadyada xayeysiinta mustaqbalka. Tusaale ahaan, weydiisashada hoggaanka si loo buuxiyo foom si aad u soo dejiso E-buug gaar ah ama aad u codsato demo alaab kasta.
In kasta oo waxyaabaha noocaas ah ay qaban karaan tilmaamo, inta badan booqdayaasha websaydhku way diidan yihiin inay wadaagaan aqoonsiyada emaylkooda ama lambarrada taleefannadooda si ay u eegaan waxa ku jira oo keliya. Sida laga soo xigtay natiijooyinka ka soo baxay The Manifest survey, 81% dadku waxay ka tageen foomka internetka inta la buuxinayo. Marka, maahan hab la damaanad qaaday oo lagu soo saaro tilmaamo.
Barashada makiinada waxay u ogolaaneysaa suuqleyda B2B inay ka helaan hogaamin tayo leh websaydhka iyagoon u baahnayn inay buuxiyaan foomamka diiwaangelinta. Tusaale ahaan, shirkad B2B ah waxay u adeegsan kartaa barashada mashiinka inay ku falanqeyso hab-dhaqanka websaydhka booqdaha oo ay ugu soo bandhigto waxyaabaha xiisaha leh qaab shaqsiyeed si ka badan sidii ugu habboonayd waqtiga saxda ah.
Macaamiisha B2B waxay u isticmaalaan waxyaabaha ku saleysan kaliya baahida iibsiga laakiin sidoo kale barta ay ku jiraan safarka wax iibsiga. Sidaa awgeed, ku soo bandhigida mawduucyada bartaha is dhexgalka iibsadaha gaarka ah iyo iswaafajinta baahidooda waqtiga dhabta ah waxay kaa caawin doontaa inaad ku kasbato tirada ugu badan ee hogaaminta muddo gaaban.
Barashada Mashiinka ee diirada lagu saarayo is-adeegsiga macaamiisha
Is-adeegid waxaa loola jeedaa marka booqde / macaamilku helo taageerada
Sababtaas awgeed, ururo badan ayaa kordhiyay waxqabadkooda is-adeeg si ay u gaarsiiyaan khibrad macmiil oo ka wanaagsan. Is-u adeegiddu waa kiis caadi ah oo loo adeegsado codsiyada barashada mashiinka. Chatbots, kaaliyeyaasha farsamada, iyo dhowr qalab kale oo AI-wanaajiyey ayaa baran kara iskuna ekeyn kara isdhexgalka sida wakiilka adeegga macaamiisha.
Codsiyada is-u-adeegsiga waxay wax ka bartaan waaya-aragnimadii hore iyo isdhexgalka si ay u qabtaan hawlo aad u adag waqti ka dib. Qalabkani wuxuu ka soo bixi karaa fulinta wada xiriirka muhiimka ah ee websaydhada booqdayaasha ilaa hagaajinta isdhexgalkooda, sida helitaanka xiriir ka dhexeeya arrin iyo xalkeeda.
Intaa waxaa sii dheer, aaladaha qaarkood waxay u adeegsadaan barashada qoto dheer inay si joogto ah wax u hagaajiyaan, taas oo keeneysa caawimaad sax ah oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Tan kaliya maahan, barashada mashiinka waxay leedahay codsiyo kale oo kala duwan. Ganacsatada, waa furaha saxda ah si ay u bartaan qeybaha macaamiisha oo adag oo lama huraan ah, dhaqankooda, iyo sida loola macaamilayo macaamiisha qaab ku habboon. Adiga oo kaa caawinaya inaad fahamto dhinacyada kala duwan ee macaamiisha, tikniyoolajiyadda barashada mashiinka shaki la'aan waxay u qaadan kartaa shirkaddaada B2B guul aan la soo koobi karin.
Tags: b2badeegga macaamiisha b2bficilka macaamiishadhaqanka macaamiishakeydka macmiilkatirada dadka macaamiisha ahmeertada nolosha macaamiishaqiimaha macaamiishawaxbarashada qoto dheerbarashada mashiinkasahan cadis-adeegidlambarradakaaliyeyaasha dalwaddii
Emily Johnson waa la-taliye suuq-geyn ah oo 10 sano oo khibrad ah u leh fulinta istiraatiijiyadaha suuq-geynta. Xilligan, waxay madax ka tahay waaxda suuqgeynta ee Warbaahinta Boosta Buluugga ah, shirkad caan ah oo xallisa xogta B2B oo fadhigeedu yahay Irving, Texas.
Infographic: Xeelado cusub ayaa soo ifbaxaya si loo wado Kobcin Tafaariiq ah Ads Google